अक्सर, केही प्रयोगकर्ताहरूले विवरण ट्याग वा सफ्टवेयर सेटिङ इनपुट को आधार मा डाटा प्रतिनिधित्व गर्ने XML फाइलहरु सामना गर्न छ। सामान्य डबल-क्लिक काम गर्दैन सम्पादन गर्दै तिनीहरूलाई खोल्न। यसले विस्तार संग सहमतिलाई पूर्वनिर्धारित प्रयोग गरिन्छ कि आवेदन छैन भन्ने तथ्यलाई कारण छ। तर तपाईं सम्पादन गर्न सकिन्छ भनेर तालिका रूपमा मानव-पठनीय फाइल प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले खोल्न सक्छन् एक XML फाइल एक्सेल मा। तपाईं आफूलाई बीच स्वरूप रूपान्तरण गर्न सक्ने कुनै पनि कन्वर्टर्स आवश्यक छैन। मात्र caveat: यो सुविधा मात्र कार्यालय संस्करण 2003 र उच्च संस्करण मा उपलब्ध छ।
कसरी एक्सेल मा XML खोल्नुहोस् गर्न: पहिलो तरिका
2016 मा डाटा को एक्सेल आधारित संस्करण आयात विचार गर्नुहोस्। पहिलो र सबैभन्दा सजिलो तरिका शुरू एक्सेल कार्यक्रम सुरु गर्न छ। अभिवादन र लोगो आवेदन सुरु बाँया मेनु त्यहाँ स्ट्रिङ हो जसमा एक विशेष लगअन विन्डो प्रदर्शन "अन्य पुस्तकहरू खोल्नुहोस्।"
कि पछि, एक समीक्षा दफा प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर XML ढाँचामा एउटा नयाँ विन्डो खोल्न रूपमा चुनिएको छ। कि पछि, सामान्य विधि हामी इच्छित फाइल फेला पार्न र खुला बटन क्लिक गर्नुहोस्। यस मामला मा, XML-फाइल Excel एक पाठ विवरण र ट्याग समावेश सबैभन्दा साधारण तालिका कागजात, साथै रूपमा बुझेका छन्। निस्सन्देह, डाटा आफै सम्पादन गर्न सकिन्छ, तर थप पछि।
दोस्रो एक तरिका: कसरी एक्सेल मा XML ढाँचामा खोल्न
व्यावहारिक पहिलो प्रस्तावित विधि फरक छैन। एक्सेल मा XML फाइल, तपाईं फाइल मेनु बाट खोल्न वा छिटो संयोजन गर्न Ctrl + O. प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
फेरि, पहिलो, खोल्न गर्न त इच्छित फाइल ढाँचा प्रकार चयन गर्नुहोस् र संवाददाता बटन थिच्नुहोस्।
तेस्रो तरिका: XML खोल्दै
त्यहाँ एक्सेल मा एक XML फाइल खोल्ने धेरै विधिहरू छन्। तसर्थ, 2016 मा कार्यक्रम को संस्करणमा, तपाईँले माथि पट्टी मेनु, जहाँ "डाटा" खण्ड चयन गरिएको छ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि बाह्य डाटा प्राप्त थिच्नुहोस्।
ड्रप-डाउन मेनुमा, बस नयाँ मेनुमा "अन्य स्रोतबाट" खण्ड चयन गर्नुहोस्, "को XML आयात देखि" स्ट्रिङ प्रयोग गर्नुहोस्। यो इच्छित फाइल र त्यसपछि खुला खोज्ने को मानक प्रक्रिया पछि छ।
सम्पादन गर्नुहोस्, सुरक्षित र निर्यात
तीमध्ये कुनै पनि प्रयोग गर्दा, प्रयोगकर्ता तालिका संरचना हुन्छ। रूपमा मानक XLS फाइलहरू साथ गरिन्छ सम्पादन नै तरिका गरिन्छ। कहिलेकाहीं, सम्पादन र डाटा सुरक्षित सुविधाको लागि विकासकर्ताहरूले मेनु लागि प्रयोग गर्नुपर्छ।
यस मामला मा, तपाईं मात्र XML-फाइल को सम्पूर्ण सामग्रीहरू आयात गर्न सक्नुहुन्छ, तर केवल के साँच्चै आवश्यक छ, उपयुक्त स्तम्भहरू र पङ्क्तिहरू मा जानकारी सम्मिलित एक डेटा स्रोत रूपमा XML-वस्तु यसलाई इशारा छ। तर यो लागि यो Microsoft आफ्नो दर्ता प्रयोग गरेर आफ्नो खातामा लग गर्न कार्यक्रम आवश्यक छ।
सूचीबाट प्रकार चयन गरेर मूल ढाँचामा सीधा हुन सक्छ सम्पादन फाइल बचत गर्नुहोस्। फाइल मेनु बाट, वस्तु र "मूल» Excel ढाँचामा सुरक्षित गरिएको छ भने, तपाईं एक निर्यात सुविधा चयन गर्नुहोस्, फाइल प्रकार मा क्लिक गर्नुहोस् र अन्तिम स्वरूप XML छ रूपमा सेट परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रयोगकर्ता यस्तो सुधार संलग्न पनि अल्छी छ, वा यसलाई तालिका को रूप मा यो ढाँचा खोल्ने लागि, कार्यालय संस्करण 2003 को निम्न संस्करण प्रयोग भने एक विशेष कनवर्टर प्रयोग गर्न आवश्यक छ। यस्तो कार्यक्रम अहिले एकदम धेरै प्रस्ताव राखे। एक चरम अवस्थामा, यदि यो फिट छैन, कुनै समस्या तपाईं ढाँचा सेकेन्ड दसौं एक जोडी मा परिवर्तन गरिने एक विशेष अनलाइन सेवाहरू उल्लेख गर्न सक्छन्। यस्तो कार्यहरू अन्त्यमा मात्र आफ्नो हार्ड ड्राइभमा XLS ढाँचामा समाप्त परिणाम डाउनलोड र त्यसपछि एक्सेल मा खुल्नेछ। तथापि, प्रायजसो, त्यस्ता कार्य, प्रत्यक्ष खोल्ने लागि नै कार्यालय 2003 मा रूपमा आवश्यक छ (आयात) XML ढाँचामा पहिले नै सुरुमा प्रदान। र यो केही मान्छे आज माईक्रोसफ्ट अफिस उत्पादनहरु तल प्रयोग छ, जस्तो देखिन्छ।
FLAC खोल्न भन्दा?
SIG फाइल कसरी खोल्न बारेमा विवरण
PKG-फाइल कसरी खोल्न बारेमा विवरण
भिडियो-एनिमेसन देखि एक GIF कसरी बनाउने
कसरी शब्दहरू "पृष्ठ 1" एक्सेल मा हटाउन: एक सरल तरिका
कसरी वचन PDF रूपान्तरण गर्न
सुन्दर अमिल्दो सैलुन। Hairstyles मा विषमता: फोटो
एक सेन्जेन भिसा लागि fingerprinted गर्न कहाँ गर्ने? एक सेन्जेन भिसा प्राप्त लागि नयाँ नियम: औंठाछापहरू
संसारको सबै भन्दा राम्रो पानी पार्क: शीर्ष 10 भन्दा रोचक र सुन्दर
Gerold - शताब्दीयौंको मार्फत पारित गरेको छ कि एक शब्द
बयलर बिरुवाहरु - सूर्य मा न्यानो ठाउँ
फ्लू लागूपदार्थ: सबैभन्दा प्रभावकारी को सूची। सर्दी लागि औषधि को सही विकल्प
कागज बनेको लेख
झोला-पूरा कुकुर: सही विकल्प कसरी बनाउने
Gauze डायपर आफ्नै हातले के
माछा र समुद्री संग घर जौ सूप मा खाना पकाउने